आइतबारबाट रिट निवेदकहरूले जवाफ दिने - नेपालबहस
आइतबारबाट रिट निवेदकहरूले जवाफ दिने
२९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारबाट रिट निवेदकहरूले जवाफ दिने भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएकाले आइतबारबाट रिट निवेदकहरूले जवाफ दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जानकारी दिएका हुन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् । वैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्री ओलीतर्फका १० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
नेकपा विभाजन: ओलीको तिकडम र सेटिङले कस्तो रुप लेला ? ३ हप्ता पहिले
विघटनमा ओलीको बद्नियतः कार्की ३ हप्ता पहिले
विघटनबिरुद्ध पक्षविपक्षको बहस सकियो, फागुन १५ भित्र फैसला आउने ३ हप्ता पहिले
नारी दिवसको अवसरमा छोरासँगको तस्वीर सेयर गर्दै करीनाले दिइन् शुभकामना १० घण्टा पहिले
नारी दिवसको अवसरमा १५ सय छात्रालाई साइकल प्रदान ११ घण्टा पहिले
भू–उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाँच कम्पनी सर्टलिस्टमा १२ घण्टा पहिले
महिलाको अधिकार स्थापित गर्न आवाज बुलन्द पार्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड १५ घण्टा पहिले
औद्योगिक राहत कोष स्थापना १० घण्टा पहिले
बसन्त र बिन्दुको ‘रात जूनैको’ गीत सार्वजनिक २ दिन पहिले
मध्यपुरथिमिमा १२ आयोजना निर्माण शुरु २ दिन पहिले
आकाश र सम्झना फिचर्ड कृष्णको फूल राम्रो ४ दिन पहिले
सौर्य तारबारको मर्मत नहुँदा हात्ती गाउँ पस्न थाले २ हप्ता पहिले
नेलम्बोद्धारा विद्यालयलाई युरोगार्ड प्रदान २ महिना पहिले
पाल्पामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, ८ जना घाइते ! २ वर्ष पहिले
विमान चालक दल ८ महिना पहिले